COPA AMERICA: Argentina oo iska xaadirisay FINAL-KA kaddib markii ay si sahlan uga talaabsatay Mareykanka+SAWIRRO – Gool FM
COPA AMERICA: Argentina oo iska xaadirisay FINAL-KA kaddib markii ay si sahlan uga talaabsatay Mareykanka+SAWIRRO
(America) 22 Juunyo 2016. Xulka Argentina ayaa gaaray finalkii labaad oo xiriir ah Copa America kaddib markii uu 4-0 ku maray xulka Mareykanka.
Waxbadan kuma ay qaadan xulka Argentina inay hogaanka u qabtaan ciyaarta oo daqiiqadii 3-aadba waxaa u dhaliyay Ezequiel Lavezzi kubbad uu u bootiyay Messi oo isna madaxa ku dhaliyay.
Daqiiqadii 32-aad ee ciyaarta kabtan Lionel Messi ayaa 2-0 ka dhigay oo wuxuu dhaliyay free kick qurux badan waana goolkiisii shanaad ee tartanka kaa oo sidoo kale uu ku noqday laacibka ugu goolasha badan taariikhda Argentina 55-gool.
Markii la isku soo laabtay ciyaarta qeybtii labaad Gonzalo Higuain ayaa goolasha u sii dheereeyay xulkiisa isagoona is raacsaday labo gool mid uu kubbad dhul ma dhacdo goolhayaha ku laaday markii laga soo celiyayna uu dhameystiray daqiiqadii 50-aad.
Halka goolka labaad uu ka helay Lionel Messi oo kabtanka Mareykanka kubbad uu qalday ayuu la soo orday oo uu siiyay Higuain oo sidaa ku dhammeystiray daqiiqadii 86-aad.
Dhaliyihii goolka koowaad Ezequiel Iván Lavezzi ayaa garoonka laga saaray daqiiqadii 67-aad wax u muuqday dhaawac halis ah kaddib markii uu ku dhacay boorarka wax lagu xayaysiiyo garoonka waxaana lagu soo badelay Erik Lamela.
Waa goolashii 18-aad uu Argentina ka dhalinayo Copa America ee iminka socda waana goolashii ugu badnaa ebid oo hal tartan oo koobkan ah laga dhaliyo.
Lionel Messi oo taariikh cusub u dhigay dalka Argentina